‘इञ्जाले पत्रकारितालाई लोककल्याणकारी कामसंग जोड्छ’ «
नेपाली पत्रकारहरुको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल (इञ्जा)ले आज विश्वभर आफ्नो तेश्रो स्थापना दिवसलाई ‘इञ्जा डे’ को रुपमा मनाउंदैछ । नेपालमा आज आयोजना हुने विशेष समारोहमा ‘उत्कृष्ट साहित्यिक कृति पुरस्कार’, ‘उत्कृष्ट खोजी पत्रकारिता पुरस्कार’, ‘उत्कृष्ट सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कार’ र ‘पत्रकारिता दीर्घ सेवा पुरस्कार’ गरेर चारवटा पुरस्कार प्रदान गरिदैछ । अमेरिका र युरोपमा पनि ‘इञ्जा डे’ को अवसर पारेर विशेष कार्यक्रमहरु आयोजना भइरहेका छन् । इञ्जाले पछिल्लो समयमा गरिरहेका कामहरुको वारेमा इञ्जा अध्यक्ष गुणराज लुइटेलसंगको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
नेपाली पत्रकारहको अन्ताष्ट्रिय सञ्जाल (इञ्जा) गठन भएको तीन वर्ष पुगेको छ । कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
नेपाली पत्रकारहरुको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल (इन्जा) को स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा म संसारभर छरिएर रहेका नेपाली पत्रकारहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । नेपाली पत्रकारिता अहिले नेपालमा मात्र सिमित भएन, यो विश्वव्यापी वन्न पुग्यो । नेपालको झण्डै एक चौथाइ जनसंख्या प्रवासमा छ र प्रवासमा जाने नेपालीहरुमध्येमा नेपाली पत्रकारहरुको संख्या पनि ठुलो हुंदै गयो । प्रविधिको विकास संगैसंगै संसारको जुनसुकै देशमा पुगेपनि नेपालमा एकपटक पत्रकारितामा आवद्ध भएका पत्रकारहरुमा पत्रकारितासंग जोडिन चाहना यथावत रह्यो । प्रवाशमा गएर पनि कतिपय पत्रकारहरु नेपालवाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने सञ्चार माध्यममा जोडिरहनुभयो भने कतिपय पत्रकारहरुले आफु पुगेको मुलुकमा नै अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न सुरु गर्नुभयो । त्यसैले सवै पत्रकारहरुलाई एउटै मालामा जोड्नका लागि इञ्जा गठन भएको हो । हामी एक वाक्यमा भन्दा विश्वभर रहेका नेपाली पत्रकारहरुलाई एकापसमा जोड्न, समयानुकुल प्रशिक्षित गर्न र अभिप्रेरित गर्न नै इञ्जा गठन भएको हो । यो तीन वर्षको अवधिमा हामीले हाम्रो संगठन मात्रै निर्माण गरेनौ, पत्रकारितालाई लोककल्याणकारी काममा पनि जोड्दै लग्यौ । हामीले जुन उदेश्यका साथ यो संस्था स्थापना गरेका थियौ, त्यो पुरा गर्दै गएका छौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघले तमाम नेपाली पत्रकारहरुको हकहितको लागि काम गरिरहेको छ । इञ्जाको छुट्टै औचित्य के छ ?
नेपाल पत्रकार महासंघको एउटा गौरवपूर्ण इतिहास छ । इञ्जा महासंघसंग प्रतिश्पर्धा गर्न होइन, सहकार्य गर्नका लागि स्थापित संस्था हो । महासंघले नेपाली पत्रकारिताको विकास र लोकतन्त्र स्थापनामा खेलेको भूमिकालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । नेपाल पत्रकार महासंघ सम्पूर्ण नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था हो । महासंघको प्रतिश्पर्धी संस्थाको कुनै औचित्य र आवश्यकता नै छैन । इञ्जा त नेपाल पत्रकार महासंघसंग पत्रकारहरुको हकहितको लागि साझेदारी गरेर अगाडि वढ्न चाहन्छ । यी दुइ संस्थाहरु प्रतिश्पर्धी नभएकोले नै महासंघका सदस्यहरु इञ्जामा र इञ्जाका सदस्यहरु महासंघमा रहन स्वतन्त्र छन् ।
महासंघ र इञ्जावीचको अन्तर के हो त ?
दुइ संस्थाहरुवीचको मुल अन्तर भनेको संरचना र सहभागिता मात्रै हो । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व नेपालभित्रवाट मात्रै चयन हुन्छ, तर इञ्जाको केन्द्रीय नेतृत्व विश्वभर छरिएर रहेका पत्रकारहरुवाट चयन हुन्छ । महासंघमा भारत, भूटान लगायत नेपाली भाषा वोलिने वा नेपाली भाषामा पत्रकारिता हुने अन्य देशवाट प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन तर इञ्जामा नेपाली भाषामा पत्रकारिता गर्ने सवै देशका पत्रकारहरुको सहभागिता छ । हाम्रो संस्थामा भूटानवाट निर्वासित भएर लामो समय नेपालमा शरणार्थी जीवन विताएर हाल अमेरिका लगायत अन्य देशमा पुनर्वास हुनुभएका पत्रकारहरु देखि भारतमा नेपाली पत्रकारिता गरिरहनु भएका पत्रकारहरु पनि समेटिनु भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरु त विदेशमा पनि खोलिएका छन् तर विदेशमा खोलिएका शाखावाट महासंघको नेतृत्व आउन विधानले दिंदैन । एउटा पुरै देशको शाखाको हैसियत भनेको विधानत प्रतिष्ठान शाखाको जस्तो मात्र छ । इञ्जाको विधानले संसारको जुन कुनामा भएपनि नेपाली पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारलाई नेतृत्वमा आउने वाटो खोलेको छ । यसको साथै इञ्जाका एशिया, युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र अफ्रिकामा क्षेत्रीय समितिहरु छन् र ती क्षेत्रीय समितिहरु मार्फत रहने गरी राष्ट्रिय कमिटीहरु गठन भएका छन् र कतिपयमा गठन हुने क्रममा छन् । त्यसैले महासंघका आफ्नै केही वन्देजहरु छन्, हामी प्रवाशमा रहेकोले ती वन्देजहरुमाथि रहेर स्वतन्त्र छौं ।
इञ्जाको स्थापना कसरी भएको थियो ?
इञ्जाको तेश्रो स्थापना दिवस मनाइरहेको वेला यो प्रश्न सान्दर्भिक छ । संसारभरका नेपाली पत्रकारहरु अट्न सक्ने एउटा संरचना निर्माण गरौ भनेर अमेरिकामा नै रहनु भएका पत्रकार किशोर सापकोटाले प्रस्ताव ल्याउनु भयो । उहांको प्रस्तावमा हामी पटक पटक छलफल गरिरहेका थियौ । पछि नेपाल वाहिरवाट पहिलो पटक नेपाली भाषामा सगरमाथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने वरिष्ठ पत्रकार रामचन्द्र खरेल र कान्तिपुर दैनिकका पूर्व प्रधान सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार योगेश उपाध्याय पनि यो अवधारणामा सहमत हुनुभयो । अमेरिकामा नै रहनुभएका पत्रकारहरु सुनिलमणि दाहाल, विष्णु शीतल, विष्णु शर्मा, उमेश शर्मा, विश्व थापा, विजय थापा, शिव विष्ट लगायत थुप्रै साथीहरुले पनि यो अवधारणा अनुरुप जाऊ भन्नुभयो । नेपालवाट वरिष्ठ पत्रकार टंक पन्त, अष्ट्रेलियावाट मनऋषि धिताल, युरोपवाट अनुराधा पौडेल पनि विश्वव्यापी नेपाली पत्रकारहरुको संस्था आवश्यक छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्नुभयो । यी सवै साथीहरुको मतको सम्मान गर्दै इञ्जाको जन्म भएको हो ।
आज तपाइहरु विश्वव्यापी रुपमा इञ्जा डे मनाउंदै हुनुहुन्छ रु आजका विशेष कार्यक्रमहरु के के छन् ?
आज हामी नेपाल लगायत अमेरिका, युरोप, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र अफ्रिकामा विविध कार्यक्रमका साथ इञ्जा डे मनाउंदैछौ । आजको विशेष कार्यक्रम भनेको काठमाडौमा नै हो । सभामुख अग्नी सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने कार्यक्रममा हामीले नेपालमा पत्रकारिता अध्यापन सुरु गराउने पत्रकारिताका गुरु लालध्वज देउसा राइलाई पत्रकारिता दीर्घ सेवा पुरस्कार प्रदान गर्दैछौ भने वरिष्ठ साहित्यकार तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीलाई १ लाख रुपिंया राशीको उत्कृष्ट साहित्यिक कृति पुरस्कार प्रदान गर्दैछौ । यसैगरी एक लाख रुपिंया राशीको उत्कृष्ट खोजी पत्रकारिता पुरस्कार टपेन्द्र कार्की र सुशिल पन्तलाई पन्तलाई प्रदान गर्न गइरहेका छौ भने उत्कृष्ट सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कार वसन्तप्रताप सिंह, नीरा पौडेल र मन्दिरा थापालाई प्रदान गर्न गइरहेका छौ । यस पटक ईन्जाको तेस्रो वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा नेपाल वाहिर रहेर पनि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशिल डिसी नेपाल, ईनेपालिज, खसोखास, नेपालिज डायस्पोरा, र खुल्लामन्चलाई अमेरिकाबाट, नेपालप्लस लाई युरोपबाट र नेपाल जापान डट कमलाई जापानबाट सम्मान गरिएको छ ।
इञ्जाले पत्रकारितालाई लोककल्याणकारी कामसंग जोड्दै लैजाने वताउंदै आएको छ । पत्रकारितालाई कसरी लोककल्याणकारी कार्यसंग जोड्दै आउनु भएको छ ?
हामी यो संस्थालाई प्रोजेक्टमा आधारित संस्थाको रुपमा विकास गराउन चहान्छौं । हामी हरक्षण नेपाली पत्रकारहरु उपचारको अभावमा मर्नु नपरोस् भनेर क्रियाशिल भएका छौं । तपाइहरुलाई स्मरण होला, व्लड क्यान्सरवाट पीडित पत्रकार कमल पौडेलको उपचारमा गत वर्ष हामीले करिव १४ लाख रुपिंया जम्मा गरेर सहयोग गरेका थियौं । कोरोना महामारीको समयमा नेपाली पत्रकारहरु कार्यरत संस्थाले तलव नदिएको, जवर्जस्ती विदामा वस्न वाध्य वनाएको र कामवाट निकालिदिएको अवस्थामा ८० जना पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्ति प्रदान गरेका थियौं । सानो स्केलमा सहयोग त हरेक हप्ता र महिनामा गरिरहेका छौं । तपाइले प्रश्न गरेजस्तै इञ्जाले पत्रकारितालाई सुचनाको माध्यम मात्र नवनाएर एउटा लोककल्याणको माध्यम पनि वनाउनु पर्छ भन्ने सोच वनाएको छ ।